सरोकारबलाको पहलमा सुकुम्वासी वस्ती जोगिए - Janakpur Today
जनकपुरधाम।धनुषाको विदेह नगरपालिका–१ ठाडीझिजाको सुकुम्वासी बस्ती शनिबार बिहानदेखि क्रासमा थिए । कोही घरमाथि डोजर चल्ने डरले चिन्तित थिए त कोही घर भत्किएपछि कहाँ वस्ने ? चिन्तामा । बृद्ध, बृद्धाहरु भन्ने यसपालिको जाडोमा कठिङ्गरीएर मर्ने चिन्तामा थिए भने सुत्केरी महिलाहरु गर्भको बच्चालाई कसरी जोगाउने भन्दै उपाय नपाएर चिन्तामा थिइन् ।
उनीहरु सबैको अनुहारमा सहजै देखिएका पीडा थियो राज्य पक्षले डोजर चलाएर भत्काउन थालेको घर । सरकारले घर भत्काएपछि कहा बस्ने ? घर भत्किएपछि बालबालिका र बृद्ध, बृद्धाको के हुन्छ ? लगायत विभिन्न प्रकारको प्रश्न उनीहरुले मनमा खेलाइरहेका थिए । मानिसहरु समुह समुहमा बसर आफ्ना पीडा सम्झिरहेका थिए ।
यो दृष्य हो, करिव १६ सुकुम्वासी परिवारको बस्ती जिल्ला अदालत धुनुषाले शनिबार विहान खालि गराउन पुगेका बेलाको । अदालतको टोली प्रहरी प्रशासनसहित डोजर लिएर बस्तीमा पगेपछि पुरा गाउँमा सन्टा छाएको थियो । चिन्ता र त्रासले मानिसहरु राम्ररी बोल्न सकिरहेका थिएनन् । कोही फोन गरेर आफ्न्तलाई आफ्नो पीडा सुनाउँदै थिए त कोही नेतालाई गुहार्दै थिए ।
मानव अधिकारकर्मी र पालिकाका मेयर बेचन दास वस्ती पुगेपछि सबै जना हतारहतारमा आफ्ना आफ्ना पीडा सुनाउन थाले । अधिकारकर्मी र मेयरले अदालत आफ्नो अधिनमा नरहेपनि तत्काल घर नभत्काउने आश्वासन दिए । आश्वासन मात्रै पाएकाले जनता अझै चिन्तामुक्त हुन सकेका थिएनन् । त्यसले त अधिकारकर्मी र मेयरकै पछिपछि पीडितहरु पनि नजिकै रहेको ठाडीझिजा चौकी पुगे । चौकीमा अदालतका प्रतिनीधि, प्रशरीसंग मेयर बेचन दास र राष्ट्रि मानव अधिकार आयोगका क्षेत्रिय संयोजक बिरबहादुर मगर, अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश संयोजक राजु पासमानले तत्काल घर नभत्काउन आग्रह गरे ।
अदालतका प्रतिनिधिले पटक–पटक दाली गर्न सुचना पठाएकाले घर भत्काउन नरोकिने जिकर गर्दै थिए । आँफूहरुलाई पनि फैसला भएको मुद्दा कार्यनव्यन गराउने आदेश रहेको ठहर गरिरहेका थिए । वस्ती बचाउन अनेकन उपाय खोजिरहेका सरोकारबलाले भने ६ महिनाको लागि तत्काल वस्ती नउजाडन आग्रह गरे । अदालतका प्रतिनीधिले भने यसपटक उनीहरुको कुरा अस्वीकार गर्न सकेनन्,अनी हुन्छ भन्दै जवाफ फर्काए । वस्तीका मानिसहरुमा खुशीले गदगद भए । पुषको चिसोमा भत्किन थालेको घर रोकिएपछि उनीहरु मिठो मुस्कानसहित सबैलाई धन्यवाद दिँदै घर फर्किए ।
जनप्रतिनिधि नै विश्वासघात ग¥यो
दुई दशकपछि २०७४ सालमा भएको स्थानीय चुनाबमा रामबृक्ष ठाकुर वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनेर सुकुम्वासी वस्ती छिरे । चुनाव जितेपछि हातहातमा लालपुर्जा दिलाउने र मुद्दा फिर्ता लिँने वाचा गरे । जिवन भर बासको चिन्ता बोकेका मानिसहरु सजिलै रामवृक्ष ठाकुरलाई पत्याए । र, चुनाव पनि जिताए । अनी विदेह नगरपालिका वाड नम्बर १ का अध्यक्ष पदमा उनी आसिन भए ।
बस्ती खाली गर्नका लागि जिल्ला अदातलमा मुद्दा दर्ता गर्ने रामसागर ठाकुरका रामवृक्ष ठाकुरका आफ्नै भाइ हुन् । त्यही रामवृक्ष जो चुनावका बेला वस्तीका सयौं मानिससंग मुद्दा फिर्ता लिने र लालपुर्जा लिाउने प्रतिवद्धता गरेका थिए । तर, तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष ठाकुरले चुनाव जितेपछि मुद्दालाई झन बढबा दिन थाले । र, मुद्दा दर्ता गर्न भाइलाई प्रोत्साहन गर्न थाले ।
स्थानयिका अनुसार वडाध्यक्षका भाई रामसागरठाकुर एलानी जग्गा र सामुहिक सडकमा घर बनाउन थालेपछि स्थानीयले बिरोध गरेका थिए । वडाध्यक्षका भाइ रामसागरले स्थानीयले वरोध गरेको न्युमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । २०७५ जेठ जिल्ला अदालत धनुषाले मुद्दा फैसला गरी वस्ती खाली गर्न आदेश दियो । त्यस यता पटक–पटक वस्ती खाली गर्न पत्राचार पनि गरिएको अदालतका प्रतिनिधि ठिठा रुपेश साहले बताए । सोनफी ठाकुरका छोरा रामसागर ठाकुर वादी रहेको मुद्दामा १६ जनालाई प्रतिवादी बजनइएको छ